Uyifaka njani i-iOS 13 okanye i-iPadOS kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad | Iindaba zeGajethi
Ngalo lonke ixesha i-Apple, okanye nayiphi na enye inkampani ikhupha ingxelo entsha okanye ihlaziya inkqubo yayo yokusebenza, kuyacetyiswa ukuba ulinde usuku ukuqinisekisa ukuba ayinazo iingxaki zokusebenza ezinokuthi khubaza isixhobo sethu. Kodwa yile nto ibhetas eyenzelwe yona.
Emva kweenyanga ezininzi ze-betas, inkampani yaseCupertino ikhuphe ingxelo, kwaye ke izinzile, iOS 13, Inguqulelo entsha ye-iOS enika ukubalasela okukhulu kwi-iPad. Ngapha koko, inguqulelo ye-iPad ibizwa ngokuba yi-iPadOS. Apha siyakubonisa uyifaka njani i-iOS 13 / i-iPadOS kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad.
Ngaphambi kokuhlaziya isixhobo sethu kufuneka jonga nokuba i-iPhone yethu okanye i-iPad ayihambelani Ngale nguqulo intsha ye-iOS. I-Apple ijolise kuyo yonke imizamo yayo nge-iOS 12 ekuphuculeni ukusebenza kwayo, into eyenze ngempumelelo enkulu, kwanezixhobo ezindala, ezazibonisa ukuba i-iOS 13 ayinakuhambelana neeterminal ezifanayo ne-iOS 12.
1 IOS 13 Izixhobo ezihambelanayo
1.1 I-iPhone iyahambelana ne-iOS 13
1.2 I-iPad iyahambelana ne-iOS 13
1.3 I-iPhone kunye ne-iPad ayihambelani ne-iOS 13
2 Uyifaka njani i-13 XNUMX
2.1 Backup kunye iTunes
2.2 Backup kunye iCloud
3 Ukuhlaziya kwi-iOS 13
3.1 Uhlaziyo kwi-iOS 13 ukusuka kwi-iPhone okanye kwi-iPad
3.2 Uhlaziyo kwi-iOS 13 oluvela kwi-iTunes
IOS 13 Izixhobo ezihambelanayo
IOS 13 iyahambelana nazo zonke iitheminali ezilawulwa yi-2 okanye ngaphezulu kwe-RAM ye-RAM. Ngale ndlela, ukuba une-iPhone 6s ukuya phambili okanye isizukulwana sesibini se-iPad Air unethuba lokuhlaziya kwi-iOS 13.
Ngakolunye uhlangothi, unayo i-iPhone 5s, i-iPhone 6, i-iPad Air okanye i-iPad mini 2 kunye ne-3, kuya kufuneka hlala ngokunamathela kwi-iOS 12, Inguqulelo enika intsebenzo uninzi lwayo ebeluya kufuna kwinguqulelo ye-iOS yezixhobo zabo ezayeka ukufumana uhlaziyo kudala.
I-iPhone iyahambelana ne-iOS 13
I-iPhone 11 (mveliso ithunyelwe nge-iOS 13)
I-iPhone 11 Pro (mveliso ithunyelwe nge-iOS 13)
I-iPhone 11 Pro Max (bafika bevela efektri nge-iOS 13)
I-iPad iyahambelana ne-iOS 13
I-iPad Pro 9,7 intshi
I-iPad Pro 12,9-intshi (zonke iimodeli)
I-iPad Pro 10,5 intshi
I-iPad Pro 11 intshi
I-iPhone kunye ne-iPad ayihambelani ne-iOS 13
IPad Air (Isizukulwana sokuqala)
Uyifaka njani i-13 XNUMX
Emva konyaka nge-iOS 12, isixhobo sethu igcwele iifayile ze-junk Ezi zivelise izicelo esizifakileyo kwisixhobo sethu, ke lixesha elifanelekileyo lokwenza isileyiti esicocekileyo. Oko kukuthi, kufuneka siqhubeke nokucima sonke isixhobo sakho ukwenza ufakelo olucocekileyo, ukusuka ekuqaleni, ngaphandle kokurhuqa ukusebenza okanye iingxaki zesithuba esinokuthi sisokole.
Ukuba asiyenzi, isixhobo sethu kunokwenzeka ayisebenzi ngokwanelisayonjengoko ichatshazelwa sisiphithiphithi sangaphakathi ngohlobo lwezicelo / zeefayile ezingasetyenziswanga kodwa ezikhoyo kwisixhobo.
Ukuba senza ufakelo olucocekileyo lwe-iOS 13 kwaye sibuyisele isipele, siza kufumana ingxaki efanayo ukuba sihlaziya ngokuthe ngqo isixhobo sethu nge-iOS 12 ukuya kwi-iOS 13 ngaphandle kokucima wonke umxholo wayo.
Backup kunye iTunes
Ukuba usafuna ukuhlaziya i-iOS 13 kwi-iOS 12, into yokuqala ekufuneka yenziwe kukwenza isipele. Ukufaka uhlobo lwenkqubo yokusebenza kwinguqulelo yangaphambili kunokubangela ukungasebenzi kakuhle Sinyanzele ukuba sibuyisele isixhobo sethu.
Ukuba kunjalo, kwaye asinalo ugcino, siya kuphulukana LONKE ulwazi esilugcinileyo kwisiphelo sethu. Ukuthintela olu hlobo lwengxaki, ngaphambi kokuhlaziya kwinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza, kule meko iOS 13, kufuneka yenza ikopi yogcino yesixhobo sethu nge iTunes.
Ukwenza ukhuphelo nge iTunes, kufuneka sidibanise i-iPad yethu okanye i-iPhone kwikhompyuter, vula iTunes kwaye ucofe kwi icon emele isixhobo sethu. Kwiwindow eya kuboniswa, kufuneka ucofe kuVimba. Inkqubo izakuthatha ixesha elininzi okanye elingaphantsi kuxhomekeke kwindawo esihleli kuyo kwisixhobo sethu ke kuya kufuneka sithathe lula.
Backup kunye iCloud
Ukuba sinesicwangciso sokugcina i-iCloud, zonke iifoto zethu ziselifu, nawo onke amaxwebhu ahambelana nenkonzo yokugcina ilifu ka-Apple. Le thina uya kuthintela ukuba wenze i-backup ukusuka kwisiphelo sethu kuba lonke ulwazi olukuyo lugcinwe ngokukhuselekileyo. Nje ukuba i-terminal ihlaziywe, kuya kufuneka siphinde sikhuphele zonke usetyenziso esizifakileyo.
Ukuba sifuna gcina usetyenziso olufanayo ebesinalo nge-iOS 12, ke oko kutsala zonke iingxaki endizichazile apha ngasentla, sinokwenza ikopi yogcino yesiphelo sethu kwi-iCloud, ukuze xa ihlaziyiwe sikwazi ukubuyisela zonke usetyenziso esasizifakile.
Ukuhlaziya kwi-iOS 13
Emva kokwenza onke amanyathelo endiwachazile ngasentla, umzuzu onqwenelekayo we Uhlaziyo kwi-iOS 13. Singayenza le nkqubo kwi-iPhone yethu okanye kwi-iPad okanye ngokuthe ngqo kwi-iTunes. Ukuba siyenza kwi-iPhone okanye kwi-iPad kufuneka senze la manyathelo alandelayo:
Uhlaziyo kwi-iOS 13 ukusuka kwi-iPhone okanye kwi-iPad
Ngaphakathi kuhlaziyo lweSoftware kuyakuboniswa ukuba sinenguqulo entsha ye-iOS yokufaka, ngakumbi i-iOS 13. Xa ucofa kuyo, i iinkcukacha zolu hlobo lutsha.
Ukuqhubeka nofakelo, kufuneka sicofe Khuphela uze ufake.
Ukuze uhlaziyo lwenzeke, isiphelo sethu kufuneka sibe iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-WiFi kunye netshaja. Ibhetri yesiphelo kufuneka ibe ngaphezulu kwe-20% ukuqala kwenkqubo yofakelo.
Uhlaziyo kwi-iOS 13 oluvela kwi-iTunes
Ukuba ungumdala kwaye ufuna ukuqhubeka nokuhlaziya isixhobo sakho ngeTunes, nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe.
Okokuqala kufuneka qhagamshela i-iPhone yethu okanye i-iPad kwikhompyuter.
Sivula iTunes kwaye ucofe kuyo icon emele isixhobo sifuna ukuvuselela.
Ngasekunene phezulu, apho kuboniswa khona ulwazi lwesiphelo sendlela, cofa apha Jonga uhlaziyo.
Nje ukuba samkele iimeko, iTunes iya kuqala khuphela uhlaziyo kwaye kamva uhlaziye isixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uyifaka njani i-iOS 13 okanye i-iPadOS kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad